Run Sausage Run! 1.12.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.12.5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု Run Sausage Run!
Run Sausage Run! ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
, ဝက်အူချောင်းကို run, run!
hot diggity ခွေးတဲ့ဒဏ်ငွေ lookin '' ပူခွေးပဲ!
သင်တစ်ဦးဝက်အူချောင်း sausage ဘယ်တော့မှ! (က? မည်သူမဆိုထိုကဲ့သို့သော ... ဝက်အူချောင်းစော Get?)
punning ရပ်တန့်နှင့်ပြေးနေ start! သို့မဟုတ်အိပ်မက်ဆိုး - - ဤစွန့်စားမှုပြေးပူပြင်းတဲ့ခွေးရဲ့အိပ်မက်ပင်ဖြစ်သည်သင်ပြုဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းပေါ် မူတည်. ။
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု၏အရသာရှိတဲ့ဝက်အူချောင်းအဖြစ် Play ။ Weisswurst သို့မဟုတ် blutwurst, ဘေကွန်သို့မဟုတ်ချောကလက် ... ပင်ရေပိုက်သမားသို့မဟုတ်ကောင်းဘွိုင်!
သင်သည်ထိုပူ-ခွေးခန္ဓာကိုယ်ကွေးအဖြစ်အဆုံးမဲ့လမ်းကြောင်းကိုအားဖြင့်သင်တို့၏အသက်အဘို့ကို run နှင့်ဤစွန့်စားမှုပြေးဂိမ်းထဲမှာကိုခွဲကုန်တယ်, ကိုမီးရှို့သို့မဟုတ်ရိုက်ချိုးတဲ့ရှောင်ရှား!
သင်ဤစွန့်စားမှုပြေးဂိမ်းထဲမှာသံမဏိနှင့်အခြားအေးမြ powerups ၏ buns ကိုဝယ်ခြင်းငှါသင့်ရဲ့ချိုမြိန် (သို့မဟုတ်စပ်) အသက်အဘို့ကို run အဖြစ်ဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်းပါ။
အရူး Labs က TabTale ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ပျော်စရာများနှင့်စွဲလမ်းဂိမ်းများကိုထုတ်ဝေထားတဲ့အောက်မှာပေါ့ပေါ့ဂိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးပရိတ်သတ်များအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မိုဘိုင်းအကြောင်းအရာဖန်တီးရန်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့လွတ်လပ်သောဖှံ့ဖွိုးတိုးတစတူဒီယိုနှင့်အတူအရူး Labs ကမိတ်ဖက်။
ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု: https://tabtale.com/contact/ ။
ကျွန်တော်တို့ကို Watch: https://www.youtube.com/iTabtale
ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ထင်သောအရာကိုသိပါစေ! မေးခွန်းလွှာ? အကြံပြုချက်များ? နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့? Talk2Us@Crazy-Labs.com: မှာကျွန်တော်တို့ကို 24/7 ကိုဆက်သွယ်ပါ
ဒီ app ကစားရန်အခမဲ့ပေမယ့်အချို့အတွက်ဂိမ်းပစ္စည်းများငွေပေးချေမှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဒီ app များပါဝင်သည်:
- TabTale နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်များ, apps များသို့မဟုတ် Third-party က်ဘ်ဆိုက်များမှအသုံးပြုသူများကို redirect အချို့တတိယပါတီများအတွက်ကြော်ငြာ
- စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သတင်းအကြောင်းကြားရန်တွန်းအားပေးအသိပေးချက်များကိုလက်ခံရန်ထို option (ဥပမာ updates များကို)
- တစ်ဦးသည်အသက်တံခါးကလေးတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တချို့ features တွေဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ (ဥပမာအမူအကျင့်ကြော်ငြာသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းကန့်သတ်ရန်) ။
သင့်ရဲ့ privacy ကိုကိစ္စရပ်များ။ ဒီ app (; enable, app ကိုဖွင့်အင်္ဂါရပ်တွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ; ကြော်ငြာများကိုပစ်မှတ်ထားနှင့်ထိုကြော်ငြာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပါအဝင်အကြောင်းအရာ personalize ဥပမာ, မေးမြန်းချက်ကိုထောကျပံ့တုံ့ပြန်) ကန့်သတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒေတာစုဆောင်းခြင်းကို enable ပေမည်။ https://tabtale.com/privacy-policy/: နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်ငါတို့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီရည်ညွှန်း။ တတိယပါတီများရည်ညွှန်းကြောင်းမှတ်ချက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒများဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ https://tabtale.com/terms-of-use/: ဒေါင်းလုပ်ကို update သို့မဟုတ်သင်ကြော်ငြာ display နှင့်အစီရင်ခံရည်ရွယ်ချက်များအဘို့နှင့်အသုံးပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များ device ကိုအချက်အလက်များနှင့်သင့်အချက်အလက်များ၏ဒီစုဆောင်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှုသဘောတူ app ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်။
Run Sausage Run! အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Run Sausage Run! အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Run Sausage Run! အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
lamune စတိုး 44k 10.58M
Run Sausage Run! ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Run Sausage Run! အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.12.5
Release date: 2018-09-21 18:13:33
Run Sausage Run! APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ